DEGDEG: Laba Qarax ka dhacay magaalada Kampala iyo faahfaahin laga helayo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
DEGDEG: Laba Qarax ka dhacay magaalada Kampala iyo faahfaahin laga helayo
Wararka laga helayo magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegaya inay saaka Qaraxyo waaweyn ka dhaceen magaaladaasi.
Qaraxyada ayaa kala dhacay meel u dhow xarunta Baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Kampala oo sidoo kale ay wasarado badan ku yaallaan iyo agagaarka Saldhiga Dhexe ee Booliska magaalada, iyadoo qasaare weyn geystay. Waxaa dab qabsaday gawaari, waxaana la xiray goobaha qaraxyadu saameeyeen.
Wararkii ugu horeeyey ayaa sheegaya in laba qof ay ku dhinteen qaraxyada, dad kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana magaalada ka jira xaalad kacsan. Ciidamada ayaa xiray Jidka Baarlamaanka iyo wadooyinka ku xeeran, waxaana socda gurmadka dadka ku waxyeeloobay qaraxyada.
Qaraxyo hore oo magaalada Kampala ka dhacay ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish, waxayna Uganda u muuqataa inay wajaheyso xaalad ay ku xoogeysaneyso kooxda ISIS.
Previous articleXOG: Maareeye oo Dib ugu biiray Kooxda Farmaajo iyo Qodob aysan ku Aamini karin
Next articleXaaladda magaalada Kampala oo kacsan iyo iyo Qasaaraha Qaraxyadii ka dhacay oo sii kordhaya..